China AUMARK TX fekitori uye vagadziri | Foton
Sangana neguta, suburban uye ipfupi-kure-pakati-peguta zvigadzirwa zvinodiwa.
Kabhini Imwe / Imwe nehafu mutsara
Kurambidza Kurema 2035-4830
YEMAHARA RANK LDT YAKazvipira KUTI TECHNOLOGICAL RUFAMBIRO KUSIMBISA KUSIMBISA KWEMACHINESE LDT Sangana neguta, suburban uye ipfupi-kure-pakati peguta zvinodiwa zvekugadzira, Dhizaini yeboka revashandisi rine rakakwira hupfumi zvido.
Iyo yepamusoro-yekuita injini inogona kuburitsa rupo simba, uye ZF giya bhokisi inoshanduka zvakasununguka, kinetic simba rinoputika ipapo ipapo.
Foton Green Simba
RUDO Powerax torque: 202Nm / r
Yakasimbiswa Rori Yemahara
Rozi Rakasimba uye Ergonomic Seating
Roof Compression bvunzo dzakasimbisa kuti iyo denga inogona kumira yakakosha masimba. Mutyairi chengetedzo uye nyaradzo zviripo mukamuri ine zvigaro zvekugara uye emhando yepamusoro mabhandi ekuchengetedza.
Inesarudzo yemidziyo yeABS inowedzera kuita kwekuchengetedza.
Rori furemu ine yakazara-yakamisikidzwa furemu ine yakasimbiswa girders.
Rear Leaf Chitubu: Kusvikira kune gumi nemasere mashure emashizha emashizha, iyo nhamba yakakura kwazvo pakati pezvigadzirwa zvakafanana, yakanakisa kutakura
Chassis inoshandisa yakasimba simbi simbi, maviri-chikamu dhiraivha shaft uye mashoma echinyakare dhizaini, akatakura akawanda asi mashoma mapundu. Makomba akajairwa, bapiro repamusoro risina rivet dhizaini, inoshandurwa nyore.
Isuzu Technology Rear ekisero: Kurema uremu, kuomarara kwakanaka uye kusimba, kukwirira mutoro kutakura, kumeso kubhuroka